Ayman Al-dawaahiri dan ma u hayaa Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed?- DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Ayman Al-dawaahiri dan ma u hayaa Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed?- DHAGEYSO
Published on November 19, 2012 by admin · 10 Comments · 6,937 views
Maalmo ka hor hoggaamiyaha ururka argagixisada ah ee Alqaacidda Ayman Aldawaahiri, ayaa soo diray farriin maqal iyo muuqaal ah oo uu kaga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Aldawaahiri oo hoggaanka Alqaacidda qabtay ka dib dilkii Osama Bin Laden, wuxuu ka murugeysan yahay jabka iyo guul darrooyinka is daba joogga ah ee la soo gudboonaaday Alshabaab iyo Alqaacidda.
Waxa uu si gaar ah uga hadlay qabsashada Kismayo oo ahayd isha dhaqaale ee argagixisada.
Dawaahirii waxa uu ku dooday in ciiidammada Kismaayo qabsaday ay yihiin Saliibiyiin doonaya in ay dadka Soomaaliyeed gaalo ka dhigaan.
Wuxuu yiri waxay la dagaallamayaan shareecada Islaamka ee Alshabaab ay gobolka ku maamulayeen.
Tolow, yaa u sheegay Dawaahiri in Alshabaab ay Shareeco islaam wax ku maamulayeen? Laakiin waxaa laga yaabaa in uu shareecada ula jeedo dhaqammada Alqaacidda ee qoor goynta , cabburinta iyo cabsi gelinta dadka ku saleysan.
Ayman Aldawaahiri, wuxxuu ugu baaqay muslimiinta caalamka in ay shacabka Soomaaliyeed ku gacan siiyaansiddii ay ula dagaallami lahaayeen cadowga ku soo duulay.
Ciidammada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayuu Aldawaahiri ku tilmaamay Munaafiqiin iyo Murtadiin.
Dagaalyahannada Ajnabiga ah ee Shacabka Soomaaliyeed nolosha u diidayna waxa uu ku tilmaamay mujaahidiin.
Aldawaahiri waxa uu ku jiraa dhuumaaleysi, ma tegi karo lagama jecla dalkii uu u dhashay ee Masar iyo dunida Islaamka, waxa uu dhowrkii biloodba mar soo diraa farriin laab la kac ah oo uu dalal nabdoon fidno uga ridayo.
Maleeshiyada Alshabaab ayuu ugu baaqay in ay dagaalka iyo dilka dadkak Soomaaliyeed sii laba jibbaaraan.
Hadalka Ayman Aldawaahiri muxuu macno leeyahay, Wax dan ahi ma ugu jiraan shacabka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed in ay u dhega nuglaadaan baaqyada Alqaacidda ee dagaal hurinta ah.
Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cabdullaahi Axmed Garruun.
cabdi kariim casse says:	November 19, 2012 at 10:24 pm	magaceyga oo ah cabdi karin ahmed dawahiri marku dhahayo shacabka somaliyen aye gaaleynayaa masomali ayuu umaleya iney diinta daciif kuyihiiin maya somali saas kuma naqan karto gaal hadana wadamada gaalada waku nolnahay dintanagana wan kudhaqanaa alxmdulillah sorry qaliiif hana haleynin
Reply »	C/qadir muclin maxamud says:	November 20, 2012 at 12:34 am	Dawaahiri wa diin laway e dadkena koxdiisa alahanoga sifeyo waa qom badiyeysanee amin amin
Reply »	harun says:	November 20, 2012 at 6:46 am	waa nin ka shaqeeyo dhibka somalia waa dad aan fiicaneen waaye waxana ka qabna ninkaas in uu yahay mid dani noohaynin uu fiirsanayo tiisa khaska ah
Reply »	wadani says:	November 20, 2012 at 6:55 am	baadarigaan weyn e dawaaahiri markuu baaq u diraayo khawaarijta asiga hoos tag muu asiga yimaado somalia oo uu janada uu sheegayo raadsho hadey sax tahay war u sheega baadarigaan somalia in eey ka fiican tahay kuna dhaqan wanagsan tahay diinta islaamka xataa dadalka laga soo gaaray diinta islaamka manta kuma dhaqmaan lkn somalia wey ku dhaqantaa baaadariyoow dawaaahire wehelkaada waa fircooon iyo sheydaan naarta insha allah?
Reply »	Cisman says:	November 20, 2012 at 11:16 am	Kacan bira somaliyey qalbikulansan uguntada dhulkina axa aa d maqleysin wahaladilo somali walaala yaal dalka iyo diinta iyo dad ka haladifaa co xaqa
Reply »	fadma says:	November 20, 2012 at 3:11 pm	midda la is weydiinaayo maxaa kagaley ayman adawaahiri arimaha somaliya hadii wax nabadeynaayo meesha uuujoogo hanabadeeyo al qaacida iyo al-shawab inta ay nagu sameysey ayaan wili quluubta dad badan somali ah ka go ila. muslinimadana mid asiga nabaraayo ma ahan qof walbo maalinta qiyaamo camalkiisa ayuu latagaa marka.caqiidada aad aamin santahay hadaanan qaadanin magaalo ayaa nahay mise gaalo raac.
Reply »	maxamed husen says:	November 20, 2012 at 11:24 pm	filimkaas waaa dhamaday eeyaa cunay,alshabab,alqaeda,waanjabinay manadoneyno insha allah,waxaa mahad allah,iyo inti naftooda maalkooga uhurtay difaaca dalka dadka somalieed,
Reply »	cawil xirsi mire says:	November 22, 2012 at 11:45 am	al qacido waa koox darbi jiifyo ah oo aan diin iyo horumar aan waxba ka aqoon
Reply »	Cabdiyare aadan says:	November 23, 2012 at 6:03 pm	Asc dhaman umada somaliyed aqyaarey manta nin angaraneyn miyaa jira dhaqanka alqacida ama ayman aldawahiri miyey hadana donayan dadka shacabka iney qaldan runti umaleyn mayo manta in leydinku farxa alqaacido wayo waxad tihin wan so aragnay walwal iyo walac ayan dalkeni uga soo cararnay marnaba lagama yaabo inaan idin garab sino anigo ku hadlaya shacabka somaliyed ee alahayoow dalkeniyo alahayow dinteniyo alahayow dowladeniyo alahayow dalka noo iftimi intas kadib kunjer waxan u hambalyeynayaa madaxda dowlada waxan idin leyahay gushina gara golkina dhaliyaa by somaliyey
Reply »	Adam ahmed mohamed :januery 01/2013 at 04:43am says:	January 2, 2013 at 5:10 am	dadka muslimiinta ah wan salamay melwalbo ay jogan waxana idin leyahay A/W/W
intaasi kadib qofwalbo siduu jecel yahay alle ayaa og ollow dalkena noo hagaji dadkena noo mideey dintena nagu dhaq dhibkan iyo mushkiladaan socoto naga bixi waa masiibo allow naga qaad adaa uqeer badan qof labaryo inta muslin dunida jogtana dhibka kaqada amin amin